Trano kanto miloko | boaty toradroa - trano fananganana Countryard Hotel - Qingdao Xinmao ZT Steel Co., Ltd.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina sy ny fandrosoan'ny fiaraha-monina dia mihamatanjaka hatrany hatrany ny fanentanana ny tontolo iainana sy ny resaka fanodinana fako.
Noho izany, ny trano fandraisam-bahiny, trano, trano fisakafoanana, kafe, sns novaina tamin'ny alàlan'ny boaty fanaterana faharoa dia mihatra amin'ny zava-misy.
Ny trano novain'ny boaty fandefasana dia misy dikany tanteraka, ary ny fiantraikan'ny fahitana ny loko mifangaro dia manampy ny loko marevaka ary manome safidy bebe kokoa ho antsika. Ny olona, ​​ny fianakaviana ary ny orinasa dia samy afaka maka izay tadiaviny, vita amin'ny boaty vy. Ny trano koa dia mety ho feno lamaody, ary miaraka amin'izay dia tafiditra ao anatin'ny tontolo voajanahary.
PACKO HOSTEL dia miorina amin'ny faritry ny helodrano tsara tarehy da nang, Vietnam. Manana fitaterana mety sy toerana tsara tarehy izy io. Raha lavitra, dia toa asa-kanto vita amin'ny boaty miloko izy io.
PACKO HOSTEL dia tranobe misy rihana roa aorina manodidina ny tokontany afovoany, misy fototra simenitra sy fefy vy ho fanohanana azy.
Raha vao jerena dia toa fitambaran-kaontenera maro. Raha ny marina, ny PACKO HOSTEL dia fifangaroana kaontenera sy kaontenera "sandoka" (trano vy modular). Ity famolavolana ity dia manampy amin'ny fitsitsiana ny vidin'ny fanamboarana sy ny fitazonana ny fahamendrehan'ny modelin'ny maritrano.
Avy amin'ny Internet ny sary, raha misy ny fandikan-dalàna dia mifandraisa mba hamafana